Uyenza njani i-imeyile yokufumana kwakhona uMthengi | Martech Zone
Uyila njani i-imeyile yokufumana kwakhona uMthengi
NgoLwesibini, Julayi 14, 2009 NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, 2016 Douglas Karr
Uninzi lwabathengisi lusebenza ukufumana, ukukhula, ukugcina izicwangciso. Fumana abathengi, khulisa abathengi kwaye ugcine abathengi. Emva kokuya kwi Ingqungquthela yeWebtrends, Ndaye ndafunda ukuba Ukufumana kwakhona abathengi bangaphambili sisicwangciso esihle.
Oko ndaya kwinkomfa, bendigcine iliso lam ngaphandle kokuphinda ndibandakanyeke okanye ndibuyise umkhankaso. Kutshanje, ndibulale eyam IBoingo iakhawunti engenazingcingo. Inkonzo isebenze ngokugqibeleleyo kwaye yayinesicelo esigqibeleleyo se-iPhone esidibanisa nayiphi na inqwelomoya kwiscreen. Khange ndiyivale iakhawunti ngenxa yenkonzo… bendisendleleni engekho nje ngoko ke bendingasayifuni.
Ekufumaneni i-imeyile, ndichukumisekile ziimpawu, uyilo kunye noyilo olungagqibelelanga. Inqaku ngalinye le-imeyile lenziwe ngononophelo kwaye lenziwa kakuhle:
uhlobo -I-imeyile inophawu olunamandla ngoko ke akukho siphithiphithi malunga nomthumeli.
umyalezo -Kukho umnxeba owomeleleyo osisishwankathelo se-imeyile ngenxa yoko akufuneki ufunde ngokuqhubekekayo ukuba awufuni.
Sipho -Kukho isaziso sefayile ye- unikezo olulodwa, ukuphakamisa umdla wokufunda ukuze bembe nzulu.
ixabiso -Ngaphambi kokukhankanya umnikelo, uBoingo uyasebenza ekuqaleni ekwazisa ngento ephuculweyo malunga nenkonzo yabo! Kananjalo bayayilandela yonke i-imeyile nge-PPS ephosa kwiimpawu ezongezelelweyo.
Iinkcukacha zokunikezela -Ubhalwe ngokungqindilili kwikopi yomyalezo ezona nkcukacha zinikezelwayo.
Igunya - umyalezo utyikitywe ngowona Mongameli kunye neCEO. Oku kudlulisela kumthengi ukuba kubaluleke kangakanani ... umyalezo uvela ngqo phezulu! (Ewe kunjalo, ndiyaqonda ukuba ayisi… kodwa into ebaluleke kakhulu ibalulekile.
Survey - ayonelanga? UBoingo ubakhathalele kangangokuba banqwenela ukwazi ukuba kutheni. Ukuba awusebenzisi isibonelelo, ubuncinci baya kuthanda ukuva ukuba kutheni. Uphando abalwenzileyo lwalufutshane, lumnandi kwaye luye kwinqanaba.
Ngokoluvo lwam, eli phulo lenziwe kakuhle kwaye lenziwe. Ngaba indenze ndayihlaziya iakhawunti yam? Hayi okwangoku- kuba andikho kwimeko yokusebenzisa inkonzo. Ngombulelo, leyo yenye yeenketho kwisaveyi ebuza ukuba kutheni ndingavuseleli. Ngaba ndiyakuyihlaziya inkonzo yam yeBoingo xa ndibuyele endleleni kwakhona? Ngokuqinisekileyo!
tags: ibhingoumkhankaso we-imeyileUyila njani i-imeyile yokuphumelelauphumelelephumelela umva umkhankaso
Ukudibanisa iselfowuni kwisiCwangciso seNtengiso yaNgaphandle
Jul 15, 2009 ngo-6: 25 AM
Ndihlala ndifumana ii-imeyile ezingalunganga ngokwenene. Kodwa ndibhloga ngabo! Ndibeka ikhonkco kwifomu yewebhu yale nkcazo ukuba unomdla kwi-junk endihlala ndiyifumana.
NgoJulayi 16, 2009 ngo-2:08 PM
Ingcebiso enkulu kuye nabani na ocinga ukusebenzisa i-imeyile njengendlela yokwandisa uphawu lwabo
Jul 17, 2009 ngo-10: 05 AM
Ndibona ingxaki enye apha. Abasebenzisi abaninzi bamashishini banemifanekiso evaliweyo kwi-Outlook yabo. Umzekelo xa ndifumana i-imeyile yentengiso, uyilo yinto yokugqibela endiyibonayo apho. Ndihlala ndibona inani leebhokisi ezibhaliweyo ezenza ukuba i-imeyile ifundeke. Xa sisenza imikhankaso yokulandela i-imeyile, sizama ukwenza izinto zibe lula, ezobuqu kunye nezimfutshane, kwaye sifumana iimpendulo ezininzi zabathengi.
NgoJulayi 17, 2009 ngo-12:34 PM
Ii-imeyile ze-HTML zisakhula. Xa ndandisebenza e-ExactTarget kwiminyaka embalwa edlulileyo-i-imeyile ze-HTML zazingaqhelekanga, kodwa izibalo zamva nje endizifundileyo yayiyi-85%+ yokwamkelwa kwabantwana. Kananjalo, izixhobo eziphathwayo zenza unikezelo olungcono kakhulu lweHTML (kunye nokukhula). iPhone kunye Crackberry baphathe HTML emails fantastically.
Ndiyakholelwa ukuba imbuyekezo kwi-imeyile ye-HTML ingaphezulu lee ngaphandle konikezelo.